Khabiirka Kala Duwan: Sheyga Qalabka Lagu Sameeyo Shahaadada Qalabka Lagu Sameeyo
Laga soo bilaabo xirfad aad u wanaagsan oo ku saabsan suuqyada ganacsiga iyo ganacsiga saameyn ku leh farsamoyaqaannada (SEO). Goobta 4 billion oo qof ayaa isticmaala bogga internetka ee webka médias sociaux. Laga soo bilaabo maalinta baaskiilada ah ee loo yaqaan 'cette méthode' - logiciel gestion temps gratuit. Snapchat ayaa ah mid aad u badan oo ku saabsan miydias socsaa dareenka qui gagne deg deg ah. Qaar ka mid ah falanqaynta kalsoonida waxaa lagu daray 9 000 nouvelles photos par seconde. La bonne waxay dooratay qaabka loo yaqaan 'Snapchat' si aad u qadarin kartid nambarka caadiga ah ee dadwaynaha iyo saamileyda. Qalabka tirtirka macmiilka ah ee nuuca loo yaqaan "Snapchat", ayaa isticmaala qalabka loo yaqaan "pouvez utiliser" oo ka mid ah shaandhaynta qaar ka mid ah dance-ka loo yaqaan "Salesforce". Grazia ayaa ka soo baxa, ka dib markii ay soo bandhigeen qorshayaasha kala duwan ee loogu talagalay cod bixinta loo yaqaan 'campagne sur les réseaux sociaux'.
Julia Vashneva, gestionnaire principale de la réussite macaamiisha chez Sare , oo ah khibrad udub dhexaad ah oo ku salaysan kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada ee Snapchat réussie.
Lorskoolajo nacas ah oo la yiraahdo Snapchat, oo ah adeegsade nuuc leh. Tusaale ahaan, adeegsade pouvez oo ka faa'iideysta taariikhda garsoorayaasha ayaa ku dhajiyay cod bixiyayaashii codbixinta. Une bonne méthode waxay ku xiran tahay taariikhda taariikhda iyo taariikhda la wadaagayo taariikhda.
Dhamaan macaamiishu waxay ku salaysan yihiin sirta "Snapchat". Tusaale ahaan, sawir qaadayaasha ayaa sawir qaadaya oo qaylo dhaan ah iyo shaqsiyaadka ku habboon. Muujinta khudbadaha ku salaysan rikoodhka doorashooyinka gaar ahaaneed. Tusaale ahaan, qayb ka mid ah qoraallada qoraalka ah ee Google ayaa xaqiijinaya in la ogaado oo la hubiyo..Rappelez-vous, cajalado iyo falanqeeye iyo falanqayn ku saabsan raadinta, iyo falanqaynta raadinta iyo raadinta
Waa muhiim in aad sameysid sawir aad u dooratid Snapchat si aad u aragto aragti iyo isbarbardhig. Dansiyada cod bixinta, door ah oo ka mid ah cod bixinta doorashooyinka iyo kuwa xirfadlayaasha ah. Shaqaalaha ka shaqeeya adeega nuucaasiga ah
Fariin qoraal ah oo ku saabsan Geo Snapchat
Foor-shaandheer shaashadda ka dibna doorbidid shaashadda kumbuyuutarka, Shirkadda 'Snapchat', oo ah shaashadda calaacalaha ah. Cette tactique caanaha macmiilka ayaa la isticmaali karaa shaashadda Snapchat ku shub gariirada. Vos graphiques doivent être 100% originaux. Dans la yiraahdo, shaashadda la socoshada macaamiisha iyo wixii kale ee muhiim ah. Laga soo bilaabo khariidad ka mid ah si aad u roonaan 1080 x 1920, iyo in ay ku haboon tahay 300kb, iyo si aad u qalabixin foomka fichier png.
N'incluez raasumo ganacsi iyo ganacsi. Haya'daha madaxbannaan, ka mid ah joornaalada ka faa'iideysta calaamadaha liiska. Sawirro nasiib ah oo ku saabsan suuq-geynta suuqa xorta ah. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ficil ahaan iyo ficil ahaanba. Si aad u hesho munaasabada ballaadhan ee loo yaqaan 'softcops', oo ah khibrad ballaadhan oo farsamoyaqaanno ah, si aad ula socotaan farsamada casriga ah
Duufaan aad u foorarsato, ka hor inta aanad dooneynin inaad mar walba aad u wanaagsanaato. Farsamooyinka Luuqadaha ee ku saabsan suuq-geynta dijitaalka ah iyo SEO Marketing-ka Suuqa Warbaahinta (SMM) oo ah mid aan ku habooneyn dance la qabsashadeyn dance la réalisation de wuxuu u sheegaa dhaqdhaqaaqa. Dance ce cas, Snapchat ayaa ku qulqulaya goobta. Snapchat waa sawir aad uwanaagsan oo ka mid ah sawir qaadayaasha sawirada. Lors de la réalisation de l'quo london, Shirkad shidaal ah oo ka mid ah suuqyada ganacsiga. Ilmahayga oo si foojignaan ah u shaqeynaya si aad u sarreeya marxaladaha iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee muhiimka ah. Tilmaamaha Qalabka, Shaashadda Cuntada ee Gacan-qabsashada Calaamadaha Ganacsi Lacageed